Nandidy ny fanapahana ny lohan'ny manequin any amin'ny fivarotana rehetra ao Herat ny Taliban
Janoary 5, 2022 0 Namaky 1 aho
Ny birao eo an-toerana ao amin'ny Minisiteran'ny Fampiroboroboana ny Fahasoavana sy ny Fisorohana ny Fahasoavana, izay voampanga ho nampihatra ny famakian'ny Taliban ny Lalàna Sharia, dia nanome baiko ny fivarotana akanjo ao amin'ny faritanin'i Herat andrefan'i Afganistana mba hanapaka ny lohan'ny manequin rehetra satria “sampy” ireny.
Taliban Ny tompon'andraikitra tamin'ny voalohany dia naniry ny hanaisotra ireo amboletra ireo mpivarotra tamin'ny voalohany, ka nilaza azy ireo ho “tsangambato” izay “ivavahana”. Na izany aza, ny tompon'ny tranombarotra dia nanohitra izany hevitra izany, ary nilaza fa hisy fiantraikany ratsy amin'ny firotsahany amin'izao fotoana izao. raharaham-barotra. Nilefitra kosa ny Taliban ary niorim-paka tamin'ny fanapahan-doha fotsiny ny manequin, miaraka amin'ny sazy henjana miandry ireo izay mandika ny fitsipika vaovao.
Nitaraina ny tompona fivarotana iray fa ny TalibanNy baikon'i dia midika fatiantoka ara-bola ho an'ny orinasa, satria eo anelanelan'ny $70 sy $100 ny manequin tsirairay.
Raha jerena ny lahatsary tsy voamarina miparitaka amin'ny tambajotra sosialy, izay ahitana lehilahy iray manapaka mannequin amin'ny tsofa, dia efa nisafidy ny hanaraka ny didim-pitsarana ny tompona fivarotana sasany.
The Taliban Nalaza tamin'ny fanalana ny ankamaroan'ny fahafahan'ny vehivavy ny mpampihorohoro fony izy vao tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny tapaky ny taona 1990. Rehefa naka ny firenena ny vondrona tamin'ny volana aogositra lasa teo, dia nivoady ny hanaja ny zon'ny vehivavy ao anatin'ny sehatry ny lalàna Sharia.
Na izany aza, rehefa nandeha ny volana maro, ireo mpitondra vaovao dia nametraka fameperana bebe kokoa ho an'ny vehivavy Afghana, izay nanakana azy ireo tsy hahazo fianarana ambaratonga faharoa sy hiasa. Iray amin'ireo didim-panjakana farany tahaka izao tamin'ny faran'ny volana Desambra no nandrara ny vehivavy tsy handeha mihoatra ny 72km (45 kilaometatra) miala ny tranony tsy misy mpitaiza lehilahy.
UNICEF dia nitatitra ihany koa ny tranganà zazavavy vao teraka namidin'ny ray aman-dreniny ho amin'ny fanambadian'izy ireo amin'ny hoavy raha latsaka anaty krizy ara-toekarena lalina ny firenena noho ny tsy fisian'ny famatsiam-bola tandrefana izay nanohana ny governemanta teo aloha.
Ny fitsipika ultra-religious an'ny Taliban dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny lehilahy ihany koa. Ny volana septambra lasa teo, noraran'ny vondrona tsy hanaratra volombava ny mpanao volo ao amin'ny faritanin'i Helmand. Norarana tsy nitendry mozika tao anaty fiarany koa ny mpamily, ary tsy maintsy mijanona amin’ny fotoam-bavaka amin’ny “toerana mety” izy ireo izao.
Previous Niangavy an'i Rosia ny filohan'i Kazakhstan mba hampitsahatra ny fitroarana malaza
Manaraka Tsy maintsy mamaritra ny fizahantany indray i Afrika amin'izao fotoana izao rehefa mivoatra ny fanarenana aorian'ny COVID